magnetik na-etinye usoro kpo oku nke brazing, mgbakwunye, agbaze, forging
Home / nnukwu mbido ọkụ ọkụ / magnetik induction usoro oku
Categories: nnukwu mbido ọkụ ọkụ, itinye n'ọkwa brazing igwe, Ngwa nrụgide na-esi ike, Ike ntinye aka, Ngwongwo Ugbo Ogologo Ogologo Tags: nnukwu ọkụ ikuku, IGBT sistemụ ọkụ ọkụ, eme ka brazing heater, Ngwunye Brazing Machine, induction forging igwe, emeputa ihe na emeputa igwe oku, ntinye ngwa ikpo oku, Ngwongwo Ugbo oku, Ngwongwo na-ekpochapu ihe, induction usoro oku, igwe agbaze induction, nnyefe mmezi nke magnetik, magnetik induction kpo oku usoro
IGBT magnetik induction usoro kpo oku
ọdịdị dị iche na nha nke induction kpo oku enwere ike gbanwee ngwa ngwa iji kpoo ihe di iche iche.
1. Heating (ọkụ na-agba ume, na-ekpo ọkụ ma na-agbaze)
Itinye n'ọkwa Hot ibe ya bụrụ Aims chepụta ọrụ ibe nke ụfọdụ okpomọkụ (dị iche iche ihe na-achọ dị iche iche okpomọkụ) n'ime ndị ọzọ na ụdị site ibe ya pịa na enyemaka nke Punch pịa, ibe ya bụrụ igwe ma ọ bụ ndị ọzọ na equipments, n'ihi na mgbe, na-ekpo ọkụ extrusion nke nche ikpe, na-eche ihu, aka, ebu ngwa, kichin na table ike, art ike, ọkọlọtọ akụkụ, fastener, mepụtara n'ibu akụkụ, ọla kọpa mkpọchi, rivet, ntụtụ pin na pin.
Ngwunye ọkụ na-ezo aka na njikọ nke ọla dị iche iche ma ọ bụ ọla na nonmetals site na kpo oku dabere na ụkpụrụ nke mgbasawanye na-ekpo ọkụ ma ọ bụ na-agbaze ọkụ, maka oge, ịgbado ọkụ nke ọla kọpa nke kọmpụta kọmpụta na mpempe akwụkwọ aluminom na ntanetị okwu, ngwakọta nke nchara na plastik. tube, akara nke aluminium (ezé ezé ezé), rotor moto na akara nke ihe ọkụkụ ọkụ ọkụ.
Smgbaze tumadi na-agbaze metal n'ime mmiri mmiri site na iji ogo dị elu, nke kachasị emetụta ị gbaze iron, nchara, ọla kọpa, aluminom, zinc yana ọla edo dị iche iche.
2. Heat Ọgwụgwọ (elu quench)
Na-achọcha ihe ngwaike na akụrụngwa dị iche iche, dị ka plier, spana, hama, anyụike, ịghasa ngwaọrụ na shiee (ubi mkpụrụ osisi).
Ennwụ maka ihe dị iche iche ụgbọala na ọgba tum tum, dị ka crankshaft, njikọ njikọta, pistin pin, wheel wheel, aluminum wheel, valvụ, ogwe aka ogwe aka, ọkara mbanye aro, obere aro na ndụdụ. Dị iche iche eletriki ngwaọrụ, dị ka gia na anyụike.
Nwụ maka akụrụngwa igwe, dị ka oche lathe na ụzọ ụgbọ okporo.
Ennwụ anwụ maka akụkụ dị iche iche ngwaike ngwaike na akụkụ akụkụ akụkụ, dị ka aro, gia (yinye wheel), cam, chuck na mwekota wdg
Nwụ maka ebu ebu, dị ka obere-ebu ebu, ebu ngwa na n'ime oghere nke ebu.
3.Welding (ịgbado ọkụ, ịgbado ọla ọcha na brazing)
Eldgbado ọkụ nke ngwá ọrụ ngwaike dị iche iche, dịka ngwá ọrụ diamond, ngwá ọrụ abrasive, ngwá ọrụ mkpọpu ala, ngwongwo alloy, ihe nkedo alloy siri ike, onye na-egwe ọka, onye na-agagharị, onye na-eme atụmatụ na ụlọ ọrụ siri ike.
Eldgbado ọkụ nke dị iche iche ngwaike n'ibu gadget: Silver soldering na ume nkwado nke ọla nke otu ụdị ahụ dị iche iche ma ọ bụ ụdị dị iche iche, dịka ụlọ mposi ngwaike na ngwaahịa kichin, friji kwesịrị ekwesị ọla kọpa, ihe ndozi ọwa ọkụ, nkenke ebu kwesịrị ekwesị, njikwa ngwaike, eggbeater, alloy steel and steel, steel and copper as well as copper and copper.
Ngwunye ngwongwo na-ekpo ọkụ na-adaberekarị na nkedo nke braze nke okirikiri, square yana ihe ndị ọzọ na-adịghị mma nke ala. Ọ dịkwa na ịgbado ọkụ braze nke ọla ndị ọzọ.
Wgbado ọkụ nke kpo oku nke ọkụ ọkụ mmiri na-ekpo ọkụ na-ezo aka na ntanye ọla nke igwe anaghị agba nchara, mpempe akwụkwọ aluminom na ihe ọkụkụ ọkụ ọkụ nke ụdị dị iche iche.
3.Annealing (iwe iwe na mgbanwe olu)
Nkpuchi nke ngwaahịa dị iche iche anaghị agba nchara, dị ka bezin igwe anaghị agba nchara, annealed na extruded can, annealed apịachi ọnụ, annealed sink, igwe anaghị agba nchara tube, tableware na iko.
Nkpuchi nke ihe ndi ozo di iche iche, dika isi golf, isi, nkpuchi ọla, ihe nkpuchi ngwaike, ihe eji eme kichin, mma, ihe mkpuchi aluminom, paul nke aluminium, ihe ntanye aluminom na ihe di iche iche aluminom.
Ntughari oge emepụta ihe ọkụkụ ma ọ bụ ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ maka mkpụmkpụ bụ usoro maka ikpo ihe akụrụngwa site na ịgbanye ike ọkụ ọkụ ugboro ugboro na nke akọwapụtara dị iche iche dabere na ụkpụrụ nke ntinye electromagnetic. Ọ bụ tumadi na ọdabara ka metal na-ekpo ọkụ na-arụ ọrụ, okpomọkụ ọgwụgwọ, ịgbado ọkụ na-agbaze. Techniquedị usoro kpo oku a na-emetụtakwa ụlọ ọrụ mbukota (dịka akara nke aluminom eji eme ọgwụ na ụlọ ọrụ nri), ihe ọkụ ọkụ (dịka extruded monocrystalline silicon na akụkụ ndị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ maka iko iko).
Ntọala nke usoro kpo oku gụnyere ntinye ntinye, isi ike AC na mpempe ọrụ. Enwere ike ịmepụta ihe na-adọrọ adọrọ n'ime ụdị dị iche iche dị ka ihe dị iche iche dị ọkụ. A na-ejikọta eriri igwe na isi iyi nke na-enye ụzọ dị ugbu a maka eriri igwe. Uzo ozo nke nkpuchi ahu nwere ike meputa uzo ozo di iche iche na-agabiga na oru ndi ozo iji meputa ihe eddy dika choro site na kpo oku.
Uru nke manetic induction usoro oku
Ngwa ngwa ngwa: ọnụego kacha nta nke kpo oku bụ ihe na-erughị 1 sekọnd (ọnụego nke kpo oku dị maka ndozi na njikwa).
Wide mkpuchi nke kpo oku: enwere ike iji ya kpoo ihe igwe di iche iche (dochie ihe nkpuchi nke nwere ike iwepu di iche iche).
mfe echichi: enwere ike iji ya mee ihe ozugbo ejikọtara ya na isi iyi nke ike, eriri ntinye yana ọkpọkọ mmiri na ọkpọkọ na-ebili; o pere mpe ma buru ibu.
Easy ọrụ: ị nwere ike ịmụta iji ya rụọ ọrụ n’ime ọtụtụ nkeji.
Mbido ngwa ngwa: enwere ike ịmalite ịrụ ọrụ kpo oku ma ọ bụrụ na mmiri na ike dị.
Low ike oriri: Ma e jiri ya tụnyere ot agụụ tube elu ugboro equipments, ọ nwere ike ịzọpụta ike site odika 70%. Nta nke mpempe akwụkwọ ọrụ bụ, obere ike oriri ga-abụ.
Akwa arụmọrụ:o nwere ihe ndị dị otú ahụ dị ka kpo oku dị n'otu (ọ dị mkpa iji dozie oghere nke eriri ntinye iji hụ ọnọdụ kwesịrị ekwesị dị ka akụkụ nke ọrụ ọ bụla chọrọ), okpomoku ngwa ngwa na oke ikuku oxic, ma nwee ike ichebe megide mkpofu ọ bụla mgbe mgbakwunye.
Comprehensive nchedo:ọ nwere ọrụ ndị dị ka nrụgide gabigara ókè, oge ugbu a, oke ọkụ na ụkọ mmiri na-egosi mkpu yana njikwa na nchekwa akpaka.
Igwe okpomọkụ na-achịkwa: ọ dị mkpa iji chịkwaa ọnọdụ okpomọkụ maka ọrụ ọkụ ọkụ dịka ọ bụla oge a na-ekpo ọkụ, ma si otú ahụ na-achịkwa okpomọkụ na-ekpo ọkụ n'otu ebe.
Comprehensive full ibu imewe: ọ nwere ike ịrụ ọrụ mgbe niile maka awa 24.
Obere nha na ibu ibu: O nwere ibu nke naanị ọtụtụ kilogram, nke, nke oke ala nwere ike ịchekwa ohere ogbako ahụ.
Mkpochapu ọkụ eletrik dị elu: ọ na-achọ ọ bụla nzọụkwụ-elu transformer nke nwere ike na-emepụta ihe dị ka puku iri voltaji, ma si otú ahụ nwere ike hụ na nchekwa kachasị.